စင် ကာ ပူနိုင် ငံ အော ချပ် လမ်း နိုက် က လပ် ဓား ထိုး မှု မှ တ ရား ခံ ၄ ဦး ကို သေ ဒဏ် ၊ ကျန် ၃ ဦး ကို ထောင် ဒဏ် ကြိမ် ဒဏ် နှင့် ငွေ ဒဏ် တို့ အ သီး သီး ချ မှတ် - Real Gaming Myanmar
စင် ကာ ပူနိုင် ငံ အော ချပ် လမ်း နိုက် က လပ် ဓား ထိုး မှု မှ တ ရား ခံ ၄ ဦး ကို သေ ဒဏ် ၊ ကျန် ၃ ဦး ကို ထောင် ဒဏ် ကြိမ် ဒဏ် နှင့် ငွေ ဒဏ် တို့ အ သီး သီး ချ မှတ်
By Realman / 1 week ago / Uncategorized / No Comments
ဇူ လိုင် လ ၂ ရက် နေ့ အ ဂါင်္ နေ့ မ နက် အ စော ပိုင်း က စင် ကာ ပူ နိုင် ငံ ရှိ က မ္ဘာ လှည့် များ ကျက် စား ရာ အော ချပ် လမ်း အော ချပ် တာ ဝါ ရှိ စက် လှေ ကား အ နီး တွင် လူ တစ် ဦး သွေး အိုင် ထဲ လူး လွန့် လျက် ရှိ သည် ။
တာ ဝန် သိ ပြည် သူ များ မှ S C D F သူ နာ ပြု အ ဖွဲ့ ထံ ဖုန်း ဆက် ခေါ် ရာ မိ နစ် ပိုင်း အ တွင်း လူ နာ တင် ယာဉ် ရောက် ရှိ လာ ပြီ အ သည်း အ သန် ကယ် ဆယ် ကြ သော် လည်း အ ခါ နှောင်း သွား ခဲ့ ပြီ ။
C C T V မှတ် တမ်း များ အ ရ မ သ င်္ကာ သူ ၇ ယောက် ကို ၁ ၂ နာ ရီ အ တွင်း စင် ကာ ပူ ရဲ တပ် ဖွဲ့ မှ ဖမ်း ဆီး နိင် ခဲ့ ပြီး ချက် ချင်း ဆို သ လို ပင် တ ရား စွဲ ဆို ခဲ့ သည် ။
အော ချပ် တာ ဝါ က အော ချပ် လမ်း ထောင့် မှာ ရှိ ပြီး အ ပေါ် ထပ် မှာ ရုံး ခန်း တွေ ဖွင့် ထား တယ် ။
အောက် ၅ ထပ် မှာ က လပ် နဲ့ ဘား တွေ ရှိ ပါ တယ် ။
မ နက် စော စော မူး ရစ် ရီ ဝေ နေ ကြ ချိန် အဲ့ မှာ ရှိ တဲ့ မိန်း မ ဆိုး လေး နိုက် က လပ် က ပြန် လာ ကြ သူ တွေ စက် လှေ ကား အ ဆင်း မှာမ တော် တ ဆ တိုက် မိ ကြ တယ် ။
ချက် ချင်း ပဲ ရန် ပွဲ စ တင် ခဲ့ ပြီး လူ အင် အား များ တဲ့ ဘက် က ဆွမ်း ကြီး ဝိုင်း လောင်း ကြ ရာ မှ ဓား ပါ သွား ခြင်း ဖြစ် သည် ။
အွန် လိုင်းပေါ်ပျံ့  နှံ့ နေ တဲ့ ဗီ ဒီ ယို ဖိုင် မှာ ယောက် ၁ ယောက် ထိုး ကြိတ် ကန် ကြောက် ကြ အ ပြီး လူ တစ် ယောက် ပုံ လျက် လဲ ကျ သွား တာ ကို မြင် တွေ့ ရ သည် ။
နိုက် က လပ် တို့ ထုံး စံ အ တိုင်း လူ ငယ် သ ဘာ ဝ မ တော် တ ဆ တိုက် မိ ရာ မှ ဖြစ် ပွား ခဲ့ သည့် ဓား ထိုး မှု ။
လူ သတ် မှု ကျူး လွန် သူ များမှာ အ သက် ၂ ၂ မှ ၂ ၇ အ ရွယ် လူ ငယ် လေး များ ။
မိန်း ခ လေး တစ် ဦး ပါ ဝင် ပြီး သူ မ အ ပါ အ ဝင် ကျန် ၃ ယောက် ကို တ ပတ် အ ကြာ ယ နေ့ ၁ ၁ . ၇ . ၂ ၀ ၁ ၉ တွင် တ ရား ရုံး မှ သေ ဒဏ် ချ မှတ် လိုက် ပါ တယ် ။
ရန် ပွဲ ဟာ စ က္ကန့် ၄ ၀ ကျော် သာ ကြာ မြင့် ခဲ့ ပေ မယ့် တ ဒ င်္ဂ ဒေါ သ ကို မ ထိန်း နိုင် ကြ လို့ တစ် ယောက် က သ င်္ချိုင်း ရောက် ပြီး ကျန် တဲ့ ၄ ယောက် က လည် ပင်း ကြိုး ကွင်း စွပ် သေ ဒဏ် ခံ ရ တော့ မယ် ။
ဆွမ်း ကြီး အ လောင်း ကောင်း တဲ့ ဘော် ဒါ ၄ ယောက် လဲ ကြိမ် ဒဏ် ငွေ ဒဏ် တွေ ချ မှတ် ခံ ထား ရ တဲ့ အ ပြင် လူ ငယ် ဘ ဝ ငယ် ရွယ် နု ပျို တဲ့ အ ချိန် တွေ ကို ချန် ဂီ ထောင် ထဲ မှာ ကုန် ဆုံး ရ တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
စင် ကာ ပူ နိုင် ငံ တွင် အုပ် စု ဖွဲ့ ခိုက် ရန်ဖြစ်ပွားမှု မျိုး ကို လုံး ဝ သည်း ခံ ခြင်း မ ရှိ ပဲ ယ ခု လို လူ သေ မှု လူ သတ် မှု ဖြစ် ပွား ပါ က ခြွင်း ချက် မ ရှိ သေ ဒဏ် ချ မှတ် ခံ ရ မည် ဖြစ် ရာ စင် ကာ ပူ နိုင် ငံ တွင် သွား ရောက် အ လုပ် လုပ် ကိုင် နေ သော ရွှေ မြန် မာ များ အား သ တိ ပြု ရှောင် ရှား ကြ ရန် တိုက် တွန်း လိုက် ရ ပါ တယ် ။
Credit : ကိုဆန်းမင်း
Previous: အရက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်လုံးဝ မသိသေးသော အချက် ( ၁၀ ) ချက်
Next: မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွန်းဖြင်တည်ဆောက်ထားသော ကျွန်းကျောင်းကြီး(၆)ကျောင်း